မင်္ဂလာအခါပေးဝေဒ – အခါပေး ဗေဒင်
akhapaybaydin 28 Dec 2009 31 Dec 2009 Uncategorized
အခါပေးဝေဒသည် လူသားအကျိုးပြု ပညာရပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်၏။ ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ပို၍ ထိရောက်၏။ မင်္ဂလာအခါပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (၂)ပိုင်းပါရှိ သည်။
(၁)။ အကျိုးပေးမည့် အကြောင်းတရား ( သက်ရှိ/သက်မဲ့) များကို ရွေးခြယ်ခြင်း နှင့်
(၂)။ ၄င်း အကျိုးပေးမည့် အကြောင်းတရား များကို အချိန်ကောင်းအခါမှန် ရွေးခြယ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်(၂)ချက် ဖြစ်သော-
အကျိုးပေးမည့် အကြောင်းတရား များကိုလည်း သေချာစွာ ရွေးခြယ်နိုင် ခြင်းမရှိ၊ အချိန်ကောင်း အခါမှန် ကိုလည်း ရွေးခြယ်၍ ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းမရှိသည့်အခါ ယတြာကို အား ကိုးကြရလေတော့၏။ ထို့ကြောင့် အခါပေးဝေဒသည် ရောဂါကို မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာ ကွယ်ခြင်း နှင့် တူ၏။ ယတြာသည် ရောဂါ ဖြစ်ပြီးမှ ကုသခြင်းနှင့် တူ၏။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အခါပေးဝေဒကိုပို၍ သဘောကျ၏။ အားရ၏။ အထက် ဖော်ပြ ပါ အချက် (၂)ချက်စလုံးသည် မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် အလွန်အရေး ကြီးလေ၏။
အကျိုးပေးမည့် အကြောင်းတရား များကို မှန်ကန်စွာ ရွေးခြယ်နိုင် ခြင်း မရှိပဲနှင့် အခါ ကောင်းကို မည်မျှပင် ရွေးခြယ်စေကာမူ အကျိုးပေးလိမ့် မည်မဟုတ်ပေ။ အကျိုးပေးမည့် အ ကြောင်းတရား များကို မှန် ကန်စွာ ရွေးခြယ်ပြီး၊ အချိန်အခါကောင်းရွေးချယ်၍ လုပ်ကိုင်မှသာ လျှင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ခံစားရ ပေ လိမ့်မည်။
ဥပမာ(၁)– သင်သည် သင်နှင့်အကျိုးမပေးမည့်မြေကွက်အား ၀ယ်ယူ၍ အဆောက်အ ဦး ဆောက် လုပ် အံ့။ မည်မျှပင် အချိန် အခါကောင်းရွေုးခြယ်၍ ဆောက်လုပ် စေကာမူ အကျိုး ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။မည်မျှပင် ယတြာ လုပ်စေ ကာ မူ အကျိုးပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ သင် နှင့်အကျိုးပေးမည့်မြေကွက်အား ၀ယ်ယူပြီး၊ အချိန် အခါကောင်း ရွေုးခြယ်၍ ဆောက်လုပ်မှသာ လျှင် အကျိုးပေး မည်သာဖြစ်၏။
ဥပမာ(၂)– သင်သည် သင်နှင့်အကျိုးမပေးမည့် သူနှင့်လက်ထပ်လျှင် မည်မျှပင် ဇေယျ တုသဗ္ဗမင်္ဂလံလုပ်နေစေကာမူ အကျိုးပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အချိန် အခါကောင်းကို ရွေုးခြယ် ၍ သင်နှင့်အကျိုးပေးမည့် သူနှင့်လက်ထပ် မှသာလျှင် အကျိုး ပေးမည်ဖြစ်၏။
ရှေးဝေဒကျမ်းများ၌လည်း လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခါပေးရာတွင် အကျိုးပေးမည့် အိမ် ထောင်ဘက် အား ဒိနကုဋ၊ ဂဏကုဋ၊ မဟိန္ဒရကုဋ…စသည်ဖြင့်မြောက်မြားစွာရွေးချယ် ကြပြီးမှ၊ အချိန်အခါ ကောင်းရွေး ခြယ်ကာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားစေလေ၏။
ထို့ကြောင့် သင်၏ဘ၀တွင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ခံစားနိုင်ရန်အတွက် အထက် ဖော်ပြပါ အ ချက်(၁) နှင့်အချက်(၂) တို့ကို ဟန်ချက်ညီညီ အသုံးချတတ်ရန် လိုအပ်၏။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုသည် နံပတ်(၁) အချက် ဖြစ်သော သင်နှင့် အကျိုးပေးမည့် သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ အကြောင်းတရားများကိုရှာဖွေ ပေးရန်အတွက် အမေး/ အဖြေကဏ္ဍ အားဖွင့်လှစ် လိုက်ပါ၏။ ခရစ်သျှနားမူရ်တီး ပဒ္ဓတိ (K.P) နက္ခတ်နည်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးမည် ဖြစ်ပါ၍ အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ အား သေချာ စွာဖတ် ရှု၍ Comments များမှနေ၍ အခမဲ့ ၀င်ရောက် မေး မြန်းနိုင်ပါသည်-
(က)။ တစ်ကြိမ်မေးလျှင် (၂)မျိုး/(၂)ခု ထက်ပို၍ မမေးရ။
(ခ)။ တစ်ခုခြင်းစီအတွက် (၁) မှ (၂၄၉) ထက် မပိုသော ဆန္ဒနက္ခတ်ဂဏန်း တစ်ခုစီ ပေးရမည်။
ဥပမာ(၁)- မောင်ဖြူနှင့် လက်ထပ်လျှင် မည်သည့်အကျိူးများကိုခံစားရမလဲ? ၄င်းအ တွက် ဆန္ဒနက္ခတ်ဂဏန်းမှာ (……)ဖြစ်ပါသည်။
မောင်ညို နှင့် လက်ထပ်လျှင် မည်သည့်အကျိူးများကိုခံစားရမလဲ? ၄င်းအတွက် ဆန္ဒနက္ခတ်ဂဏန်းမှာ (……)ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ(၂)- (…….) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျှင် မည်သည့်အကျိူးများကိုခံစားရမလဲ? ၄င်းအ တွက် ဆန္ဒ နက္ခတ် ဂဏန်းမှာ(……)ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ)။ ဆန္ဒနက္ခတ် ရွေးခြယ်ရာတွင် မိမိ၏ စိတ်ဇော၌ စွဲစွဲမြဲမြဲ ထင်နေသောဂဏန်းကိုသာ ပေးသင့်ပါသည်။ စိတ်ပျံ့လွင့်မှုများနေလျှင် စာမျက်နှာ(၄၀၀)ကျော်သော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ယူ၍စာမျက် နှာ(၂၄၉)ကို မကျော် အောင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လှန်၍ ညာဘက်စာမျက်နှာဂဏန်းအား ရွေး ချယ်၍ပေးပါ။မှန်ကန်သော အဖြေကို ရပါလိမ့်မည်။
(ဃ)။ အဖြေတစ်ခုကို စိတ်တိုင်းမကျမခြင်း ဂဏန်းပြောင်း၍ မမေးရ။ ဂဏန်းပြောင်း၍ မေးခဲ့လျှင် သင်၏တာဝန် သာဖြစ်သည်။
(င)။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်မေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားမေးမြန်း ခဲ့လျှင် မေးမြန်းသူနှင့် မည်သို့တော်စပ်သည်ကို သေချာစွာဖော်ပြပါ။
(စ)။ မြန်မာစာ စစ်စစ် (သို့) English စစ်စစ်ဖြင့်သာမေးမြန်းကြပါရန် နှင့် ကပြား Myanglish ဖြင့်မေးမြန်းခြင်းအား လုံးဝဖြေကြားပေးမည် မဟုတ်ပါ။
(ဆ)။ အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများ အောက်မှာသာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြ ပါရန်။
(၄)။ ဘယ်ပညာကို သင်ရမလဲ၊
(၅)။ ဘယ်အဆောက်အဦး ၀ယ်ရမလဲ၊
( ၈)။ ဘယ်ဇာတ်လမ်း၊ဘယ်ဇာတ်ကားကို ရွေး/ရိုက်ရမလဲ၊
(အမေးအဖြေ ကဏ္ဍအားဆက်လက် တိုးချဲ့သွားပါမည်။)
ခရစ်သျှနားမူရ်တီး ပဒ္ဓတိ (K.P) နက္ခတ်နည်းစနစ်ဖြင့် ဟောကြားပေးမည် ဖြစ်၍ တိကျမှု အတွက် အာမခံသည်။
(မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သားများအား စစ်မှန်သောနက္ခတ်နည်းစနစ်နှင့် ရင်းနှီးစေရန်နှင့် တစ်ဦးချင်း ချမ်းသာခြင်းမှသည် တစ်နိုင်ငံလုံးချမ်းသာခြင်းဆီသို့ ဦးတည်ပါသည်။)
ဒုတိယအချက်ဖြစ်သော မင်္ဂလာအခါကောင်းရွေးချယ်ခြင်းအား နီးစပ်ရာဆရာများထံ တွင် အကြံဥာဏ် တောင်းယူကြပါရန် လေးစားစွာတိုက်တွန်းရင်း………
Previous စရ၊ထိရ၊ဒွေးဒဟ နှင့်ကျွန်တော်
Next ညီလေး ကိုအောင်ပိုင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
7 Oct 2010 at 2:32 am
19 Oct 2010 at 5:53 pm
သူများတွေ မေးထားတာတွေကို ကြည့်ပြီးမေးပါ ညီလေးရေ…။
7 Oct 2010 at 2:33 am
19 Oct 2010 at 5:52 pm
27 Jan 2012 at 4:15 am
ဘယ်သူ့ကိုလက်ထပ်ရမလဲ ကဏ္ဍမှာဝင်မေးချင်ပါတယ်။ မေးခွန်းက ၂ ခုဆိုတော့ (၁) အိမ်ထောင်ရေးကံကြမ္မာ (အသက်အပိုင်းအခြားဘာညာကွိကွပေါ့လေ) (၂) ဖူးစာရှင်ရဲ့ ရုပ်ရည် ကိုသိချင်ပါတယ်။ ဆန္ဒဂဏန်းက ၁၁၁ ပါ။
27 Apr 2012 at 8:39 am
meena saun says:
20 May 2012 at 6:26 am
my date of birth is 31 dec 1985 tuesday born.
i want to know about my future.espicially about work.
8 Sep 2012 at 7:46 am
နာမည်အရင်းက (—-)ပါ…မွေးသက္ကရာဇ် ၀၂၊၁၂၊၁၉၇၂ စနေ သမီးပါ။လက်ရှိအလုပ်ကဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်၊ထိုင်းနိုင်ငံပူကက်မြို့မှာပါ၊ဆိုင်မှာလုပ်နေတဲ့အခြောက်တယောက်ကကျမ.မကောင်းကြောင်းဖောက်သည်တွေကိုပြောပြီးကျမဆိုင်နဲ့အနီးမှာဘဲ့တခြားတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးဆိုင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်၊ဖောက်သည်တွေပါခေါ်သွားပါတယ်။ဆိုင်မှာဖောက်သည်အဟောင်းတွေပြန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။အသစ်တွေတော့လာနေပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဆိုင်မှာလူပါးသွားတယ်ပေါ့ဆရာရယ်…..အဲဒါကျမရဲ့ဆိုင်မှာဖောက်သည်တွေများလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဟောပေးစေချင်ပါတယ်။
ဆိုင်နာမည်ကတော့ ပူကက်မှာကျမကိုလူတိုင်းက .မနိုင်.လို့ခေါ်ပါတယ်..ဆိုင်နာမည်ကိုလဲ.မနိုင်.ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘဲ့ပေးထားပါတယ်..ကျေးဇူးပြုပြီးတနှစ်စာဟောပေးပါယတြာနည်းလဲပေးပါ…
8 Sep 2012 at 7:50 am
ဆန္ဒဂဏာန်းက ၇ ဂဏာန်းပါ…
14 Sep 2012 at 5:14 am
Ma Naing သို့…
လုပ်ငန်းမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ၊ ဒေါသထွက်စရာတွေကြုံရမယ်။ လုပ်ငန်း အပြိုင်အဆိုင်ရှိသည်။ သို့သော် အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ရမည်။ ဆန္ဒပြည့်မည်။ လုပ်ငန်းအမြတ်မှ အမြတ်အစွန်းရမည်။
(10.11.2012) အတွင်း စီးပွားရေး ပုံမှန်ကောင်းမည်။
(10.11.2012) မှ (30.1.2013) အတွင်း စီးပွားရေးဝင်ငွေတွေကောင်းမယ်။
(30.1.2013) မှ (26.3.2013) ကြား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေတွေ့ရမယ်။
(26.3.2013) မှ (20.8.2013) ကြား စီးပွားရေးဝင်ငွေတွေကောင်းမယ်။
ယတြာကတော့ အခြောက်ကို စစ်မှုထမ်းခိုင်းလိုက်ပါ။ Email ထဲမှာ ဆက်ဖတ်ပါ။
hlaing htoo aung says:
14 Oct 2012 at 10:51 am
ဆရာ ကျွန်တော် ဘယ်သူနဲ့လက်ထပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဘယ်လိုမိန်းကလေးလဲ။ ရပ်ဝးကလားအနီးကလား။အိမ်ထောင်ကျကိန်းကောရှိလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဘယ်တော့လောက်အိမ်ထောင်ကျမလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်ရဲ့မွေးသကရာဇ်က (3.9.1986) ဗုဒ္ဓဟူးသား။ပုတိဘွားပါဆရာ။ ဆန္ဒနက္ခတ်က7ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာ။
Kaungshuthit Myanmarsar says:
26 Feb 2013 at 2:58 am
ကျွန်တော်က ကျူရှင်ဆရာပါ။သင့်တော်မယ့်အဆောင်ယတြာလေးကို ကျေးဇူပြုပြီး ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာ။
19 Apr 2013 at 2:12 pm
16 Jul 2013 at 6:21 am
အိပ်ရာဝင်ခါနီး ခေါင်းရင်းမှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆုတောင်းအိပ်ပါ။ မီးသတ်ကိုတော့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပါ။
28 Apr 2013 at 3:57 pm
Singapore မှာ ACCA တက်နေတာပါ။S Pass နဲ့အလုပ်ရချင်ပါတယ်။ ဂဏန်းမှာ(၄၇)ပါ
ACCA (14)ဘာသာလုံးကို (၃)နှစ်အတွင်းပြီးချင်ပါတယ်။အလုပ်နဲ့ကျောင်း၂ခုစလုံးမှာအဆင်ပြေချင်တာပါ။
17 Jul 2013 at 3:57 am
khin maung myo says:
2 Aug 2013 at 1:07 am
khin maung myo,
khin maung myo သို့
Dear Sayar, I haveatwo choice. 1 is metal fabricator and millwright .my number is 79.Please check for me think you very and haveanice day.
2 Aug 2013 at 11:32 pm
Sayar, I live in Canada in since 1996.I haveagood job. I can’t save money and also I am mechanic. Please, Sayar choose for me what kind of job I have to do.
7 Aug 2013 at 5:43 am
Please choose the jobs your choice and giveanumber within 249 for each job so that I can check and reply.
7 Aug 2013 at 2:11 pm
9 Aug 2013 at 10:57 am
metal fabricator နှင့် millwright တို့က တစ်ခုတည်းလား (သို့) တစ်ခုစီလား။ တစ်ခုချင်းစီဆိုရင်တော့ စူစုပေါင်း နံပါတ်နှစ်ခုပေးရမှာပါ။
16 Sep 2013 at 10:19 am
Dear sayar ,I work in own job , my sister , but staff is not stay long our office pls explain my problem, so i worry about that , pls ASAP to me we are address kamayut
17 Sep 2013 at 3:38 am
နှစ်​ဖက်​လုံးကို သြဇာရှိတဲ့ စ​နေသားသမီး (သို့) စ​နေနာမည်​ရှင်​ တစ်​ဦးဦးကို အကူအညီ ​တောင်းပါ။ ​သောကြာ​နေ့ ၁၀း၄၅ မှာ ဝင်​ဒါမီယာထဲမှာရှိတဲ့ ဓာတ်​​ပေါင်းစု​စေတီရဲ့ အင်္ဂါ​ထောင့်​မှာ လက်ဖ​က်​ကိုးပွဲကပ်​ပြီး လိုရာဆု​တောင်းပါ။
khin lai lai win says:
26 Oct 2013 at 6:57 am
26 Oct 2013 at 7:23 am
26 Oct 2013 at 7:00 am
30 Oct 2013 at 6:01 am
28 Oct 2013 at 6:13 am
28 Oct 2013 at 6:56 pm
Nay Myo Aung သို့…
ဗေဒင်ပညာမှာ စီးပွားရေးဆိုသော ဝေါဟာရ မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင် စသည်ဖြင့်သာ ရှိပါသည်။ ဗေဒင်ဆရာ စဉ်းစား၍ရသော အလုပ်ကိုလည်း သင်တို့လုပ်ချင်လား၊ လုပ်နိုင်လားလည်း ဗေဒင်ဆရာမသိပါ။ ဥပမာ- ဗေဒင်ဆရာက လေယာဉ်ပျံ ဝယ်ရောင်းလုပ်ပါဆိုလျင် သင်လုပ်ချင်ပါမည်လော၊ လုပ်နိုင်ပါမည်လော။ သင့်အနေအထား အတိုင်းအတာကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။ အဲဒီလို ရမ်းမေးလျင်တော့ မဟာဘုတ် အပေါ်(၃)လုံးစာ မိသွားပါလိမ့်မည်။ သင့်ဘဝတွင် အကျိုးရှိလိုလျင် သင်လုပ်နိုင်သော အလုပ်ကို စဉ်းစားပြီး အကျိုးပေးမပေး ဗေဒင်ဆရာနှင့် တိုင်ပင်ခြင်းကသာလျင် သင်လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကို ရောက်ပေလိမ့်မည်။
19 Jan 2014 at 8:24 am
19 Jan 2014 at 10:24 am
22 Jan 2014 at 1:25 pm
ဆန္ဒဂဏာန်း(၅)ပါ အင်္ဂါသားနှင့်လက်ထပ်လျှင် မည်သို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မည်နည်း။ လိုအပ်လျှင် ယတြာပါပေးပါရှင်
13 May 2015 at 4:43 pm
ဆရာ ဗုဒ္ဓဟူး သမီးပါ။၁၃.၃.၁၉၉၁ ပါ။ အခုသမီးချစ်​သူက​နောက်​တ​ယောက်​ထားသွားပါတယ်​။သူက အင်္ဂါသားပါ ၇.၇.၁၉၉၀ ပါ။ သမီးဆီသူပြန်​လာမလာသိချင်​ပါတယ်​။သူနဲ့သမီး ဖူးစာဆုံ မဆုံ သိချင်​ပါတယ်​ဆရာ
12 Jun 2015 at 8:39 pm
ဆရာကျွန်တော်က 12.10.1992 ဖွားပါဆရာတနလာင်္သားပါလက်ရှိဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘူးဆရာအဲဒါဘယ်တော့လောက်အဆင်ပြေမလည်းသိချင်လို့ပါဆရာ